admin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၉၈)
လင်းသက်ငြိမ် ● နှလုံးသားမပါတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေ
သြဝါဒပါတိမောက် ဆိုသည်မှာ - Ashin Zawana (Kone Zaung)
ကျော်ဟုန်း ● စိတ္တဇ အလင်္ကာ ရှင်းတမ်း
>ABSDF former CEC ko Ne La passed away
နော်ခမ်းတို့ ၄ ဦး ကွပ်မျက်ရာသို့ ခေါ်ဆောင်ပုံကို တရုတ်အစိုးရ CCTV တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်
စမ်းစမ်းတင် - တွံတေး၊ ဆူးအက်နဲ့ ကရာတူးမြောင်း တွေက ပေးတဲ့အတွေး
မောင်လူပေ - ရှန်ဟိုင်းစတော့ ညွှန်းကိန်း ၁၀ရက်နေ့မှာ သုံးရာနှုန်း ပြန်တက်
အောင်သဇင် - ရှုံးမဲမဲပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းနေတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်
>Cartoon Saw Ngo – China, North Korea and Burma
>Swan conplaints about Thabin Association's decision
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● လာလီပေါပ့်များနှင့် နေထိုင်ခြင်း
မောင်လူရေး - ဖွဲ့စည်းပုံ နင်းမိုင်း
>Tay Za and Film
Join 89,185 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month February 2019 (69) January 2019 (138) December 2018 (147) November 2018 (163) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
မောင်လူပေ – ပြီးတော့မှာ လား trade war
မောင်လူပေ – ပြီးတော့မှာ လား trade war (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရိ ၂၀၊ ၂၀၁၉ အမေရိကားနဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကတော့ ပြီးဆုံးမဲ့အရိပ်အရောင်တွေ ထွက်လာပြီ။တရုတ်က အမေရိကားရဲ့ထွက်ကုန်တွေကို တို့မြှင့်ဝယ်မယ်။ ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေပြနေတာကို...
တင်အေး (၈၈ မျိုးဆက်၊ ဗကသ) – ဗမာပြည်နိုင်ငံရေး ပကတိအခြေအနေ နဲ့ တတိယနည်းပရိယာယ်လမ်းစဉ် (၁)
တင်အေး (၈၈ မျိုးဆက်၊ ဗကသ) – ဗမာပြည်နိုင်ငံရေး ပကတိအခြေအနေ နဲ့ တတိယနည်းပရိယာယ်လမ်းစဉ် (၁) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၉ ပြေးကြည့်ရင် တွေးကြည့်တာထက် မောတယ်လို့ ငယ်ငယ်က နောက်ပြောင်ပြီး...
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – ခေတ်စားလာတဲ့ ၀န်ကျဉ်းစွာနေထိုင်နည်းနဲ့ မာရီကွန်ဒို
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – ခေတ်စားလာတဲ့ ၀န်ကျဉ်းစွာနေထိုင်နည်းနဲ့ မာရီကွန်ဒို (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၉ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ လိုချင်သလောက် ရချင်သလောက် ရှာနိုင်သလောက် ပြည့်စုံတဲ့ အနောက်ပြည်မှာ စိတ္တသုခကတော့ ရှားပါးတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။...
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ကန်တော့ပါရဲ့
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ကန်တော့ပါရဲ့ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၁၁) – အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari (မိုးမခ)...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Upper Hand
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Upper Hand (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၉ Tags: ရွှေမိ Related...
K ငြိမ်းချမ်း – နွေနေကို ဖြတ်ကူးလားတဲ့ကဗျာဆရာရဲ့လေပြည်
K ငြိမ်းချမ်း – နွေနေကို ဖြတ်ကူးလားတဲ့ကဗျာဆရာရဲ့လေပြည် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၉ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကြီးဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာပေါင်းသောင်း ခြောက်ထောင်နဲ့ သပွတ်အူ ရေမှာ မျောနေသလိုဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့...
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – ခွင့်မလွှတ်တာနဲ့ တာဝန်မယူတာ
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – ခွင့်မလွှတ်တာနဲ့ တာဝန်မယူတာ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၉ ဒီနေ့မှဖတ်ရတာ၊ မိုးမခကောင်းကင်ဂျာနယ်မှာ၊ ဆရာမောင်စွမ်းရည်ရဲ့ “ဘုရားလောင်းလေသံမျိုးနဲ့ ရက်စက်ခဲ့သူများကို ခွင့်လွှတ်ပါ” ဆိုတဲ့ စကား...
ဖိုးနီ – ဗိုလ်ကျော်ဇော အလွမ်းပြေ
ဗိုလ်ကျော်ဇော နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အကြို တင်ဆက်မှု ဖိုးနီ – ဗိုလ်ကျော်ဇော အလွမ်းပြေ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၉ ချစ်ရဲဘော်ရေ အလွမ်းတွေ ထားရစ်ခဲ့ပေါ့ ဒီမှာတော့ တသသ...
မောင်လူပေ – ၂၀၁၉ ဝက်နှစ်
မောင်လူပေ – ၂၀၁၉ ဝက်နှစ် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ မကြာခင်ကြရောက်တော့မဲ့ ၂၀၁၉ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ငါးရက်နေ့ဟာ ချိုင်းနိစ်ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးနေ့ (Chinese New Year Day) ဖြစ်သလို ဝက်(Pig)...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ရေးသားမထားသော ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်သောဖြစ်ရပ်များ
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ရေးသားမထားသော ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်သောဖြစ်ရပ်များ ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – အခန်းဆက် ၂၂ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ Steven Levitsky နှင့် Daniel...
အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၄ )
အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၄ ) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊...
မောင်စွမ်းရည် – ခွင့်မလွှတ်ဘူး
မောင်စွမ်းရည် – ခွင့်မလွှတ်ဘူး (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ ဗိုလ်ခင်ညွန့်နဲ့တကွ ဗိုလ်သန်းရွှေ … ဘာညာစတဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်၊ တရားခံတွေကို ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ခွင့်လွှတ်တယ်၊ ခွင့်လွှတ်ရမှာပေါ့ … ဆိုတဲ့စကားတွေကို...
မောင်လူပေ – ဝယ်ကြမလား အမေရိကား
မောင်လူပေ – ဝယ်ကြမလား အမေရိကား (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉ အလယ်အလတ်အဆင့် တရုတ်တွေပါ ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကားရဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အကြောင်းလေး ပြောပြမလို့။ အမေရိကားဆိုတာ ကမ္ဘာအနှံ့က ပြည်သူများအတွက်ရင်ခုန်ဖွယ်နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့။ အခြေချဖို့အခွင့်အခါပေးရင် ထိပ်ဆုံးက...
ခိုင်မာကျော်ဇော – မျက်ရည်စတွေနဲ့ 
သန်းဌေးမောင်၏ ပန်းချီ ခိုင်မာကျော်ဇော – မျက်ရည်စတွေနဲ့(မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉ ကချင်ကို သယ်မယ် ရှမ်းကို သယ်မယ် ကရင်ကို သယ်မယ် ရခိုင်ကိုလည်း သယ်မယ် ….....
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၁၀) – ဘာသာစကားအစ
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၁၀) – ဘာသာစကားအစ Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari...
မောင်လူရေး – ဒါးထမ်း ဒုတ်ထမ်း ရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ
မောင်လူရေး – ဒါးထမ်း ဒုတ်ထမ်း ရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ ဇလုံတောင်တဲ့။ နေရောင်မှာ ရွှေတောင်ပေါက်တဲ့တောင်။ မိတ်ဆွေဆတော်တပါးက ဘုရားဖူးလိုက်မလားဆိုတော့ ကောက်လိုက်သွားလိုက်တာ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့်...
မိုက်ခဲစိန် – အစိုးရမရှိတဲ့တိုင်းပြည် အမေရိကန်ပြည် တဲ့လား ဟိတ်
မိုက်ခဲစိန် – အစိုးရမရှိတဲ့တိုင်းပြည် အမေရိကန်ပြည် တဲ့လား ဟိတ် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျူပ်တို့ အမေရိကန်ပြည်မှာ အစိုးရမရှိတော့ပါဘူး။ အစိုးရ မရှိတော့ဘူးဆိုတာက အစိုးရရုံးတွေ ပိတ်ထားရတာ၊ အစိုးရမှာ...
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Pipe Dreams
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Pipe Dreams (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Tags: ရွှေမိ Related posts...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဒီမိုကရေစီစံညွှန်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဒီမိုကရေစီစံညွှန်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – အခန်းဆက် ၂၁ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Steven Levitsky နှင့် Daniel Ziblatt...
Page3of 1,002«12345...1002»